Koofur galbeed oo soo dhoweysay guusha laga gaaray deyn cafinta Soomaaliya - Hargeele - Wararka Somali State
Koofur galbeed oo soo dhoweysay guusha laga gaaray deyn cafinta Soomaaliya
Muqdisho-(SONNA)-Wasiirka Dhallinyarada iyo cayaaraha Dowlad Goboleedka Koofur galbeed Soomaaliya, Xildhibaan, Cali dhuux Maxamed ayaa sheegay in ay si weyn u bogaadinayaan heerka uu haatam marayo barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya.
Wasiir Cali dhuux oo la hadlay warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed ayaa amaanay doorka wanaagsan ee ay Madaxda Dalka iyo kuwa maamul goboleedyada ka qaateen guulaha laga gaaray qorshaha deyn cafinta, isagoo sheegay in wixii haatan ka dambeeya ay Soomaaliya ka yaraanayaan culeysyo badan oo ay ka mid yihiin samaynta Lacag cusub oo uu Dalku yeesho, dhinaca maal gashiga iyo shaqa abuurka.
Dhinaca kale, Wasiir Cali dhuux ayaa ku ammaanay ciidanka xoogga iyo kuwa daraawiishta Koofur Galbeed guulihii ay ka gaareen howl-gallada ay ku baacsanayaan Aragagixisada Al-Shabaab, kuwaasoo qaybo badan oo ka mid ah Shabeellada hoose ka xoreeyay kooxaha nabad-diidka, wuxuuna Shacabka ugu baaqay in ay garab istaagaan Ciidamada una tilmaamaan halka uu cadowga ku sugan yahay.
Cali dhuux Maxamed, Wasiirka Dhallinyarada iyo ciyaaraha KG ayaa ugu dambeyntii kula dardaarmay bulshada Soomaaliyeed in ay qaataan talooyinka ay madaxda Dalka usoo jeedisay Shacabka ee ku aaddanaa ka hortagga Cudurka Coronovirus, wuxuuna kula taliyay shacabka in ay joojiyaan isu imaashaha badan iyo is-dhexgalka si looga taxaddaro xanuunkan.
Afgooye: Deegaanno horleh oo laga cabsi qabo in uu ku fataho webiga Shabeelle “SAWIRRO”
Wasaaradda Warfaafinta XFS oo ku wargelisay dhammaan Shirkadaha Dalxiiska iyo hoteelada in ay iska diiwaan geliyaan Wasaaradda
Boliiska Soomaaliya oo Gacanta kusoo dhigay koox ka ganacsata Carruurta